ဆာကူရာ.. နှင့် ပြင်ဦးလွင်..က..ဘုန်းကြီးကျောင်းသား..(၃) ~ MSU Portal
ဆာကူရာ.. နှင့် ပြင်ဦးလွင်..က..ဘုန်းကြီးကျောင်းသား..(၃)
စာရေး.သည့်..အကျင့်..ရှိသော်လည်း..ရေးရာတွင်..ကြိုတင်..စိတ်ကူးလေ့မရှိ..ရေးရင်းနှင့်..ရောက်ချင်ရာ.. ရောက် အတွေးနောက်..လိုက်..ရေးတတ်သည်..။ ပြီးတာနဲ့..အယ်ဒီတာမရှိသော..မိမိစာမျက်နှာမှာ..တင်လိုက်ယုံပင်..။ တစ်ခါတစ်လေ..ကျောင်းစာဖတ်နေရင်း..ပျင်းလာသည့်အတွက်..ပေါ်လာသည့်အတွေးကို..ချရေးလိုက်သည် လည်းရှိသည်..။ သို့ဖြစ်ရာ..ကျွန်တော့်စာတို့သည်..ဟို..ရောက်..ဒီ..ပေါက်..။
ဟိုရောက်..ဒီရောက်..ရေးတတ်သည့်အကျင့်ကြောင့်.လည်း..ဂျပန်ကနေ. .ပုသိမ်..ကိုရောက်သွား..ခဲ့ ရ.. သည်..။ မိတ်ဆွေများ..ကို..တောင်းပန်ပါသည်..။
KOBE နှင့် Kinki Maritime Bureau မှာ..အလုပ်ဆင်းရစဉ်က..သဘောင်္ကျင်းများကို..သွားပြီး..Survey လုပ်ရသည်..။ Existing Ship များပါသလို..New Build Ship များလည်း..ပါသည်..။ သဘောင်္ဟောင်းများကတော့..Certificate Renew လုပ်သည့်..Survey များဖြစ်သည့်အတွက်..တစ်ကြိမ်သာ သွားရလေ့ရှိသည်..။ တည်ဆောက်ဆဲသဘောင်္သစ်များကတော့..သဘောင်္ဧရာခင်းခြင်း (Keel Laid) မှသည် သဘောင်္ အစမ်းခုတ်မောင်းခြင်း (Trial Run) ကြားမှာ..အကြိမ်ကြိမ်သွားရသည်..။
တစ်ရက်မှာ..KOBE ရှိ Dockyard အသေးလေးတစ်ခုကို..Survey သွားရသည်..။ သဘောင်္က..Sea going Tug အသစ်ဖြစ်ပြီး..ထိုင်ထားသည့်..အင်ဂျင်က..မြင်းကောင်ရေ ၃၀၀၀ ကျော်ရှိသည့်.. သဘောင်္အသေးလေး ဖြစ်သည်..။ ကျွန်တော်တို့..သွားပြီးစစ်ဆေးရသည်က..ME Safety Devices တွေ Testing လုပ်ခြင်း နှင့် Main Switch Board Safety Devices တွေ..Testing လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်..။
Maritime Bureau မှာ..သဘောင်္စစ်ဆေးသည့်..Procedure ရှိသည်..။
စစ်ဆေးရမည့်..လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်သာမက.. လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်တစ်ခုခြင်းစီမှာ..စစ်ဆေးရမည့်..၊ စမ်းသပ်ရမည့်..အလုပ်များ..လည်း..၊ သဘောင်္အရွယ်အစားနှင့်အမျိုးအစား..အလိုက်ဖော်ပြပြဌာန်းပြီး သား..၊ သဘောင်္ကျင်းမှာလည်း..သဘောင်္အလိုက် Inspection/Survey Record File ရှိသလို..ရုံးမှာလည်း.. ရှိသည်..။ သဘောင်္တည်ဆောက်မှု..ပြီးစီးမှု..အခြေအနေအလိုက်..စစ်ဆေးမှုအဆင့်ဆင့် ကိုဆောင်ရွက် သွားရသည်..။ မှတ်တမ်းတင်ရသည်..။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်..လက်မှတ်ထိုး..ထားရသည်..။ မှတ်ချက်များ..ရေးထားရသည်..။
သဘောင်္ကျင်းများကို..ရောက်လျှင်..ထုံးစံအတိုင်း..သဘောင်္ကျင်းမှ..တာဝန်ရှိသူနှင့် JG မှ..Inspector တို့..မိတ်ဆက်သည်..။ လုပ်ရမည့်..စစ်ဆေးရေး..လုပ်ငန်းအကြောင်းဆွေးနွေးသည်..ပြီးမှ..လုပ်ငန်းခွင် ထဲ..၊ သဘောင်္ကျင်းထဲကို..သွားသည်..။ Maritime Bureau ကို JG ဟုလည်း..သိကြ..ခေါ်ကြသည်..။
Japan Government ၏အတိုကောက်ဖြစ်သည်..။ စစ်ဆေးရေးမှူးများကိုလည်း..Surveyor ဟုမသုံး..၊ Inspector ဟုသုံးလေ့ရှိသည်..။
သဘောင်္ကျင်းမှ..တာဝန်ရှိ..အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးက..သဘောင်္ကျင်းအ၀မှာ..လာကြိုပြီး..ဧည့်ခန်းထဲကိုခေါ်သွား သည်..။ များသောအားဖြင့်..ကော်ဖီမှုန့်.ပါးပါး..ကို..ရေနွေးဖြင့်ဖျော်..၊ ပြီးမှ..ရေခဲသေတ္တာအတွင်းထည့်ထား သည့် ကော်ဖီိအေး ဖြင့်ဧည့်ခံလေ့ရှိသည်..။ သကြားမပါ..၊ နို့မပါ..။ ကော်ဖီအရသာ..ရှိသည့်..အ၀ါရောင်ဖျော့ ဖျော့.. အရောင်ရှိသော.ရေခဲရေဟု..ခေါ်လျှင်လည်း..ရမည်..ထင်သည်..။
ကျွန်တော်တို့..ထိုင်နေစဉ်မှာ..အသက်(၃၀)ခန့်လူငယ်တစ်ဦး..၀င်လာသည်..။အလုပ်ဝတ်စုံ (working clothes) နှင့်ပင်ဖြစ်သည်..။ သက်ဆိုင်ရာ..သဘောင်္၏ File ကိုလည်း..ယူလာသည်..။ ဆံပင်က..ရွှေရောင်
နားတစ်ဘက်မှာ..နားကွင်းပါသည်..။ ပိန်ပိန်ပါးပါး နှင့် ကိုရီးယား F4 မင်းသားများနှင့်ဆင်သည်..ရုပ်ချောသည်။ အရပ်တော့ သိပ်မရှည် ၅ပေ၅ လောက်သာရှိမည်..။
ကြိုဆိုလာသူ..အင်ဂျင်နီယာက..မိတ်ဆက်ပေးသည်..။ သူတို့..သဘောင်္ကျင်း၏ General Manager ဟုပြောပြပါသည်..။
တစ်နေ့တာ..အလုပ်ကို..Discussion လုပ်အပြီး..သဘောင်္ဆီကို..စစ်ဆေးဘို့သွားတော့..သူကျန်နေခဲ့သည်..။ သဘောင်္တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာနှင့် ကျွန်တော်တို့..အင်စပက်တာ(၂) ဦးသာ သွားကြသည်..။
သဘောင်္ပေါ်ရောက်တော့..သူ့အပိုင်းနှင့်သူ.ဆိုင်ရာ..အင်ဂျင်နီယာများ..စောင့်နေကြသည်.။ Electrical , Control, Mechanical , Piping စသည့် Section အလိုက်တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာများက..ဒီနေ့ တစ်နေတာ အတွက်..စစ်ဆေးရမည့်..အပိုင်းများကို..သူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ..စမ်းသပ်ပြသည်..။ ကျွန်တော်တို့က..လိုက်စစ်ပြီး၊Inspection Record မှာသွင်းသည်..။
Inspection ပြီးတော့..သူတို့သဘောင်္ကျင်းရုံးမှာ..လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတန်းများ..လက်မှတ်ထိုးသည်။ လုပ်ငန်းများအပြီးမှာ..
ဘယ်လိုမှ..မအောင်းမေ့ပါနှင့်..ဟု..စကားခံပြီး..ကျွန်တော်က..General Manager အကြောင်းစပ်စု သည်.. သူက..သဘောင်္ကျင်းပိုင်ရှင်ရဲ့..သား..လား..တူလား..ဟု..။
Naval Architecture နှင့် Master Degree ကိုထူးထူးချွန်ချွန် ရထားခဲ့.သူ..ဟုလည်း..သိခဲ့ရသည်..။ တော်လိုက်တာ..ဟု..ရင်ထဲမှာ. .မှတ်ချက်ပေးမိသည်..။ ငါတို့..ဆီက..ကောင်တွေလည်း..ဖြစ်နိုင်တယ်..ဟု..တွေးမိသည်..။
သည်..သဘောင်္ကျင်းလေးက..နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ..တည်ထားခြင်းဖြစ်သည်..။ တစ်နှစ်ကို..Sea Going Tug ..၈စင်းမှ..၁၀စင်းထိ..လောလောဆယ်တည်ဆောက်နေသည်ဟု..ပြောပြပါသည်..။ ကျွန်တော်တို့..ဒေါပုံ သဘောင်္ကျင်း ၏ ၄ပုံတစ်ပုံလောက်သာ.. ကျယ်ဝန်းပြီး..၀န်ထမ်းက..၁၀၀ကျော်ကျော်..သာရှိသည်..။ သဘောင်္တည်ဆောက်ရာတွင်သုံးသည့် သံပြားသံချောင်းများကို..ခေတ်မှီ CNC Machine များ၊ Automatic Control Welding Machine , Cutter များသုံးသည့်အတွက်..၀န်ထမ်းဦးရေ နည်းနည်းသာလိုခြင်းဖြစ်မည် ထင်သည် ။ ရုံးဝန်ထမ်းကလည်း..ဆယ်ဂဏန်းမျှသာ..။
ပုံပြင်ရုံ (သဘောင်္တည်ဆောက်ရာတွင်..သုံးမည့်..သံပြားများကို..ပုံချ.. ပုံဖြတ်သည့်အလုပ်ရုံ) ကလည်း..၊ ဒေါပုံသဘောင်္ကျင်းပုံပြင်ရုံ၏ တစ်ဝက်ခန့် သာ..ရှိသည်..။
ဒေါပုံသဘောင်္ကျင်းမှာရှိသည့်..ပုံပြင်ရုံက..အခုတော့..စာမေးပွဲ ဖြေသည့်.. အခန်းဖြစ်နေပြီ..။ သဘောင်္အသစ်မတည်နိုင်သဖြင့်..ပုံပြင်ရုံလုပ်ငန်းများ..မရှိတော့..သည်မှာ လည်း ကြာခဲ့ပြီ..။
ဒီအလုပ်က..Engineering Drawing ၏ ကဏ္ဍတစ်ခု..ဖြစ်သည့်..development ကို အသုံးပြုရသည်..။ ကျွန်တော်တို့..ဆီက..အင်ဂျင်နီယာကျောင်းတွေ..မှာ..သင်ကော..သင်သေးရဲ့လား..မသိတော့..။
မိဘ..က..ပြောသည့်အခါမှာလည်း..၊ ကျွန်တော်..ကလေးမဟုတ်တော့ဘူး..လူကြီးဖြစ်နေပြီ..။ ဘွဲ့ရပြီးပြီဗျ..၊အဲဒီလောက်..ပြောမနေနဲ့..ဟု ဘုပြန်တောသည်..။
မည်သို့..ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ ရသည်ကိုတော့..သူတို့..လေ့လာမိချင်မှ..လေ့လာမိမည်..။ ဂီတာ..တီးကျင့်ရင်..လက်မှာ..အရေကြည်ဖု..ပေါက် သည်နှင့်.. ဆက်မတီးဘဲ.ဂီတာကို...ဖက်အိပ်နေသူ..လည်း..များနိုင်သည်..။ သူ..အားကျသည့်..အဆိုတော်က..တစ်နေ့မှာ..ဆယ်နာရီအထက် ဂီတာကို..တီးခတ်ရင်း.. လက်ချောင်းလေးတွေ..လက်ဆစ်လေးတွေ..မှာ.အသားမာတက်သည်အထိ..နှစ်နှင့်ချီပြီး.ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်များ ကို ရှာဖွေခဲ့ရမည်မှာ.၊ အအိပ်ပျက်..အစားပျက်ကြိုးစားခဲ့ရမှာလည်း..သေချာသည်..။
ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်သည့် ဂျပန်မှာ.. သည်နေရာကို.. သူလွယ်လွယ်နှင့်ရလာမည်..မဟုတ်..။
အားကျရ..သူတို့..၏ အဆင်းကို..အလွယ်လိုက်.အတုခိုးပြီး..ဘောင်းဘီတိုပွပွကို..၀တ်..၊ ဦးထုတ်ကို.ပြောင်းပြန်ဆောင်းထား..သော်လည်း..၊
အချင်း..ရအောင်.လုပ်ရမည်..ဆိုတော့..၊ ဟာဗျာ..ဒါလွယ်တာမှတ်လို့..ပင်ပန်းတယ်ဗျ...ဟု..မေ့ချင်ယောင်..ဆောင် ချင်ဆောင်နေပေ..မည်..။
သူတို့..လူငယ်အများစုက.လည်း..မိဘ.ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုလက်မခံသလို..၊ မိဘအိမ်မှာ..မနေဘဲ.. ကိုယ်ဒူးကိုယ်ချွန်..ကိုယ့်အခန်းကိုယ်ငှါးနေပြီး..ကိုယ့်ဘ၀.ကိုယ်ရပ်တည်..နေသူတွေရှိသည်.။ စကာင်္ပူလို..နိုင်ငံမှာပင်..အထက်တန်းအောင်ပြီး.ကျောင်းသားတွေက.. ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ.. စားပွဲထိုးလုပ်ပြီး.. အလုပ်လုပ်..၀င်ငွေရှာတာမျိုးတွေ..ရှိသည်..။
၁၈ နှစ်ကျော်နေပြီ..မိဘစကား..နားထောင်စရာမလို..ဆိုသည့်အပိုင်း.. ကိုတော့..ဥရောပကယူပြီး..လယ်ရာ..ပြန်စား..ကိုတော့.. ဗမာ..စတိုင်လ်..လုပ်နေ..တာမျိုး.တွေ.။
အာရှ၏ ထိပ်တန်းနိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သော..ကျွန်တော်တို့..အခုအချိန်မှာတော့..
မိုက်တွင်းထဲက..ကုတ်ကပ် တက်ဘို့.တော့.. လိုနေ..ပြီ..။